Eziokwu ... 2 afọ 9 ọnwa gara aga #792
Daalụ natara: 51
N'ime ọnwa abụọ gara aga, Europe furu efu ụgbọ elu abụọ dị ịtụnanya bụ ndị gbara gburugburu karịa afọ 40. Aga m enwe ike ikwu na, Air Berlin bụ ụgbọelu kacha amasị m na Europe ... ọ dị mwute na ha anọkwaghị.
Berlin ụgbọ elu.
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs nke akpọrọ airberlin ma ọ bụ airberlin.com, bụ ụgbọ elu ụgbọelu nke abụọ kachasị na Germany, na-esote Lufthansa, na ọdụ ụgbọ elu Europe nke asaa kachasị na usoro nke ndị njem na-ebu. Ọ na-elekọta ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Berlin Tegel na ọdụ ụgbọ elu Düsseldorf ma na-eje ozi obodo iri na abụọ nke German yana ebe njedebe na Europe, Caribbean na America.
Air Berlin bụ otu n'ime mmekọrịta Oneworld, nke nwekwara Belair nke nọ na Switzerland mgbe a kwadoro ire NNKI na Etihad Airways nke 49% na Nọọmentị 2016. E depụtara ya na Frankfurt Stock Exchange. Etihad Airways bụ onye na-ekenye òkè dị ukwuu, ebe ọ gbasaa òkè ya na 29.21% na 2011. A na-akpọ Air Berlin na Charlottenburg-Wilmersdorf, nke dị na Berlin.
Na 15 August 2017 Air Berlin kwuru na ọ na-etinye akwụkwọ maka enweghị ego, ma ụgbọ elu ndị ahụ ga-aga n'ihu, n'otu akụkụ ekele maka ego nke Gọọmenti Germany nyere.
Ụgbọelu Monarch, nke a makwaara dị ka Monarch, bụ ụgbọ elu ndị Britain na ụgbọ elu ụgbọelu nke dabeere na Luton, na-ejikwa ụgbọ elu agafe na ebe ndị dị na Mediterenian, Canary Islands, Cyprus, Egypt, Greece, Sweden na Turkey. Isi ụlọ ọrụ ụgbọelu dị na Luton, tinyere ebe ndị ọzọ na Birmingham, Leeds / Bradford, Gatwick na Manchester. Monarch bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ ala ndị kasị ochie na UK na ọ ghaghị ịgbanwe aha ya tupu ya akwụsị ọrụ. O nwere ndị ọrụ 3,000 nke 1 October 2017.
Ụgbọelu ahụ na-ebu ndị njem 5.7 nde n'oge 2015, ọnụ ọgụgụ 19% jiri ya tụnyere 2014. Eze ga - enweta na 2018 mbụ nke ụgbọ elu Boeing 45 MAX-737 ọhụrụ 8. Ndị a ga-emesị dochie ụgbọ mmiri A320 na A321 nke ugbu a. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikikere United Kingdom Civil Aviation Authority (CAA) License A Type, na-enye ya ohere ibu ndị njem, ibu na mail na ụgbọ elu na 20 ma ọ bụ karịa oche.
Monarch banyere nchịkwa na 4: 30am na 2 October 2017, ịkwụsị ọrụ na mmetụta ozugbo, gburugburu otu afọ mgbe asịrị banyere ọbịbịa ya na-abịa nso. Ugbu a, CAA na-achịkwa ebe nrụọrụ weebụ nke ụgbọelu, na ụlọọrụ na ọrụ ndị KPMG na-eduzi.
Oge ike page: 0.175 sekọnd